Proverb Ahitra no nanafintohina, ka ny tokonana no haetry! [Rinara 1974]
Proverb Anaran’ ahitra no misy tsy hita fototra ; anaram-biby no misy anoano ; fa ny teny tsy mba misy anoano. [Houlder 1895 #560, Cousins 1871 #168]
Proverb Aza manao ombin’ Imarovatana : sady mahalany ahitra iray lohasaha no mahalany mangahazom-bola folo ; nefa tsy hita izay taviny, fa ny kibony ihany no mihalehibe. [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverb Bozaka aman' ahitra. [Veyrières 1913 #1618]
Proverb Bozaka aman' ahitra : ao hita-masoandro fa tsy tandrin' olo-miavona. [Rinara 1974 #967]
Proverb Fahafatesam-balala ka mamikitra ahitra irery. [Rinara 1974 #1050]
Proverb Kibobo sy alika mahay mihaza ka tsy avelan' ny vodi-ahitra tsy hihaona. [Rinara 1974 #1637, Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverb Lelan’ omby, ka miraoka ahitra ho any ny trafony. [Cousins 1871 #1364]
Proverb Marary lava ohatra ny ahitra an-tsena. [Rinara 1974]
Proverb Maty tsy atrehin-kavana toy ny adrisa, ka mamikitra ahitra irery. [Veyrières 1913 #2874]
Proverb Mifaditra ahitra. [Veyrières 1913 #87]
Proverb Miraoka ny ahitra. [Veyrières 1913 #2627]
Proverb Nahoana no be feo toa toloho, nefa manjohy tsy mahasava ahitra ? [Rinara 1974 #2667]
Proverb Na samy valala aza : ny adrisa any anaty ahitra, ny ambolo eny ambony ravina. [Rinara 1974 #2754]
Proverb Ny zaza no njola, rainy niherikerika nandevina ny ahitra. [Veyrières 1913 #102]
Proverb Raha malazo ny ahitra, dia mihintsana ny voniny. [Veyrières 1913 #677]
Proverb Raha tsy hita eny amin' ny hazo ny soherina, dia tadiavina any anatin' ny ahitra. [Veyrières 1913 #6526]
Proverb Saonjo anaty ahitra. [Veyrières 1913 #1705]
Proverb Trafon' omby ririnina : miara-ringitra tamin' ny ahitra. [Rinara 1974 #284]
Proverb Tsy mba toy ny tsiriry vonon-kanidina, fa ny tsiriry ahitra mipetraka amin' ny tany. [Rinara 1974 #4576]
Proverb Tsy mba tsiriry vorona aho ka manidina raha ritra ny rano, fa tsiriry ahitra ka maniry raha ritra ny rano. [Houlder 1895]
Proverb Tsiriry ahitra hipetraka amin' ny tany, fa tsy mba tsiriry vorona handositra ny ambanilanitra. [Veyrières 1913 #490]
Proverb Tsiriry ahitra ka miara-ritra amin' ny rano. [Rinara 1974 #4459]
Proverb Tsy satrin' ny zaza ny ho njola, fa ny mpandevin' ahitra no miherikerika. [Veyrières 1913 #3423]
Proverb Valala maty fahavaratra aho, ka mamikitra ahitra irery, tsy misy mpanala alahelo. [Veyrières 1913 #2933]
Proverb Voninkazo manitra anaty ahitra : hosihosena vao mamerovero. [Cousins 1871 #3736, Nicol 1935 #438]